सेयर बजारमा सुस्तता आउँदा घाटा कसलाई ?
नेपाली शेयर बजार १ वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागि रहँदा लगानीकर्तामा वितृष्णा पलाएको छ । यसले लगानीकर्तालाई घाटा त छँदैछ साथै शेयर कारोबारमा गिरावट आउँदा अन्य कुन कुन क्षेत्रलाई असर पर्दछ भन्ने बारे शेयर कारोबारबारे जानकार रोहन शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन् ।
लगानीकर्तामा वितृष्णा पलाउँदा, सेयर बजारमा सुस्तता आउँदा, कारोबार रकममा भारी गिरावट आउँदा घाटा कसलाई ?
१) लगानिकर्ता बिकल्प खोज्न बाध्य भई बजारबाट पलायन हुन्छन्।
२) कारोबारमा कमी आउँदा सेयर ब्रोकरहरुको आम्दानीमा भारी गिरावट हुन जान्छ।
३) नेप्से, सिडिएस, धितोपत्र बोर्डको आम्दानीमा गिरावट आउँछ।
४) लगानिकर्ताको नाफाबाट सुती सुती कर असुली गर्ने सरकारले असुली गर्ने करमा गिरावट हुन जान्छ।
५) धितोपत्र ब्यवसायी तथा कारोबारी सँस्थामा रोजगारी कटौती हुँदा रोजगारीमा असर पर्छ।
६) सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा बिश्वाब्यापी रुपमा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारको अवस्था कमजोर देखिंदा समग्र मुलुकको साखमा नकारात्मक असर पर्दछ।
७) पछिल्लो समय प्राथमिक बजारप्रतीको समेत अबिश्वाशको कारण धितोपत्र निश्काशनकर्ता र प्रत्याभुतीकर्तालाई समेत १०४ डिग्रीको ज्वरो आएको पाईन्छ। सायद यो ज्वरोले नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक उनिहरुलाई थला पारेको छ। फलत लगानिकर्ताको गुरु मन्त्र आईपोमा कदापी घाटा हुँदैनू भन्ने मन्त्र डेट एक्स्पाएर औषधी झैं भएको छ।
तसर्थ सरकार देखी बजारसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै एउटै छाना मुनी रहेको हुँदा बजारको प्रतिकुल अवस्थामा कसैलाई पनि फाईदा हुँदैन।
हाम्रो मुख्य समस्या भनेको Communication Gap नै हो। निती निर्माता तहबाट कुनै पनि निती नियम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म आईपुग्दा बिरालोको पनि सिङ उम्रने अथवा भएको साँढे को पनि सिङ हराउने अवस्था सृजना हुन गएको पाईन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा बजारको पछिल्लो समस्याको जड भारित औसत लागत तथा अर्थ समितीको अध्यानको क्रममा रहेको बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्सको बिषयलाई लिन सकिन्छ।
पुनश्च : एक हप्तामै समाधान गरिने भनिएको भारित औसत लागत गणना बिधी आज तीन महिना भईसक्दा पनि झन् गंजागोल भएर लगानीकर्ताको लागी भार बनेको छ भने सेयर कहाँ किनबेच गरिन्छ भनेर प्रश्न गर्ने सेयरको बारे अति नै कम जानकारी भएको मानानीयलाई अध्यान समितीको संयोजक बनाईएको छ। दुई महिनामै प्रतिवेदन बुझाउने भनिएकोमा दुई महिनासम्म एक पटक पनि बैठक नबसेको समितीलाई चाहिं कसले सचेत, निगरानी र कारवाही गर्ने ? के डाढु पन्यौ हातमा लिने भान्छे सम्बिधान भन्दा माथी हो ?